लेख > टोमी Tkach द्वारा > चीट भन्दा राम्रो
के तपाईं कहिल्यै ठूलो भीडमा जानु भएको छ जहाँ तपाईंलाई सानो र तुच्छ लाग्छ? वा तपाईंले एउटा विमानमा बस्नुभयो र याद गर्नुभयो कि भुईमा भएका मानिसहरू बगहरू जस्तै थोरै थिए। कहिलेकाहिँ हामी सोच्दछौं कि परमेश्वरको नजरमा हामी फोहोर जस्ता देखिन्छौं जुन फोहोरमा उडिरहेका छन्।
यशैया :०: २२-२40,22 मा परमेश्वर भन्नुहुन्छ:
उहाँ पृथ्वीको परिधि भन्दा माथि सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ, र त्यहाँ बस्ने मानिसहरू फोहोरझैं छन्; उहाँले एक पर्दा जस्तै आकाश फैलिएको र पाल जस्तै यसलाई सर्छ जो एक जीवनमा; शासकहरूले तिनीहरू केही होइनन् भनेर देखाउँछन्, र पृथ्वीका न्यायाधीशहरूलाई नष्ट गर्दछन्। जब तिनीहरू रोप्दछन्, रोप्ने बित्तिकै उनीहरूको जमिन पृथ्वीमा जरा गाडिए झैं उसले तिनीहरूलाई मर्न थाल्छ र त्यस्तै अन्य चीजहरू पनि दिन्छ। चक्रवातले तिनीहरूलाई भूस जस्तै टाढा लैजान्छ। के यसको मतलब यो हो कि हामी "केवल सलहहरू" हौं, भगवानलाई धेरै मतलब गर्दैनौं? के हामी त्यस्तो शक्तिशाली व्यक्तिको लागि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छौं?
यही अध्यायले परमेश्वर हाम्रो हितको सवाललाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। उसले हाम्रा कठिनाइहरू देख्दछ र हाम्रो मुद्दा सुन्न कहिल्यै अस्वीकार गर्दछ। उहाँको समझ को गहिराई हाम्रो भन्दा धेरै छ। उहाँ कमजोर र थकितमा चासो राख्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई बल र बल दिनुहुन्छ।
यदि परमेश्वर पृथ्वी भन्दा माथि सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ भने, उसले वास्तवमा हामीलाई कीरा जस्तै देख्न सक्छ। तर यो सँधै उपस्थित हुन्छ, यहाँ हामी संग, हामीमा र हामीलाई ठूलो ध्यान दिन्छ।
हामी मानिसहरु अर्थ को सामान्य प्रश्न संग लगातार चिन्तित देखिन्छ। यसले कसै-कसैलाई विश्वास दिलायो कि हामी यहाँ दुर्घटनामा छौं र हाम्रो जीवन अर्थहीन थियो। "त्यसोभए हामी उत्सव मनाउँछौं!" तर हामी वास्तवमै मूल्यवान छौं किनकि हामी भगवानको स्वरूपमा सृजिएका छौं। उहाँ हामीलाई मान्छेको रूपमा मान्नुहुन्छ, तिनीहरू प्रत्येक महत्त्वपूर्ण छ; सबैजना उसलाई आफ्नो तरिकाले सम्मान गर्छन्। एक लाख को भीडमा, प्रत्येक एक अर्को को जस्तै महत्वपूर्ण छ - सबै हाम्रो आत्मा को निर्माता को लागी मूल्यवान छ।
त्यसोभए हामी किन एक अर्काको अर्थ अस्वीकार गर्न यति व्यस्त देखिन्छौं? कहिलेकाँही हामी अपमान गर्दछौं, अपमानित पार्छौं र सृष्टिकर्ताको छवि बोक्नेहरूलाई अपमान गर्दछौं। हामी सबैलाई परमेश्वर प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई हामी बिर्सन्छौं वा बेवास्ता गर्छौं। वा के हामी विश्वास गर्न यति घमण्ड गर्छौं कि केहीलाई केवल "उच्च" को अधीनमा राख्नको लागि यस पृथ्वीमा राखिएको थियो? मानव अज्ञानता र अहंकार, दुर्व्यवहार समेत द्वारा ग्रस्त देखिन्छ। यस मुख्य समस्याको वास्तविक समाधान भनेको निश्चय पनि ज्ञान र विश्वास हो जसले हामीलाई जीवन दिनुभयो र यसको अर्थ छ। अब हामीले हेर्ने हो कि हामी यी चीजहरूसँग कसरी व्यवहार गर्न सक्छौं।
एक अर्कालाई अर्थपूर्ण प्राणीको रूपमा व्यवहार गर्ने हाम्रो उदाहरण येशू हुनुहुन्छ जसले कहिल्यै कसैलाई फोहोर जस्तो व्यवहार गर्नुभएन। येशू र एक अर्काप्रति हाम्रो जिम्मेवारी उहाँको उदाहरण अनुसरण गर्नु हो - हामीले भेट्ने प्रत्येक व्यक्तिमा परमेश्वरको स्वरूपलाई चिन्नु र त्यस अनुरूप तिनीहरूलाई व्यवहार गर्नु। के हामी भगवानको लागि महत्त्वपूर्ण छौं? उहाँको समानता बोक्ने व्यक्तिको हैसियतमा हामी यत्तिको महत्त्वपूर्ण छौं कि त्यसले हाम्रो एक मात्र छोरोलाई हाम्रो लागि पठाउनुभयो। र यसले सबै भन्छ।